Torohevitra amin’ny fiasana amin’ny mpamaky beta
Alohan’ny fandefasana ny sora-tanana ho an’ny mpamaky beta, andramo ny mahita ny định dạng izay mety tsara indrindra ho azy ireo.
Lazao amin’ny mpamaky beta anao ny karazana fanehoan-kevitra nokarohinao. Ireo lisitra sy lisitra fanontaniana tianao anontaniana dia mety hanampy.
Aza mandray ny valiny manokana! Aoka ho azo antoka ny mihaino amin’ny saina misokatra.
Azonao atao koa ny manatona mpamaky boky hamaky ny bokinao mialoha ny daty famoahana azy (bebe kokoa eo ambany).
2 3. Mở rộng mạng của bạn
4 6. Tour ảo Manangana blaogy
5 7. Manaova fialan-tsasatra
7 9. Giảm giá
8 10. Quảng cáo trả tiền
Ny mpamaky bolongana misy anao no mpihaino tsara indrindra amin’ny famokarana ny bokinao! Ny haino aman-jery sosialy dia mety ho fitaovana mahomby amin’ny famokarana boky.
J bd ny Fitidihana ara-tsosialy momba ny Media Social.
Ao amin’ny blaoginao sy ny gazetiboky mailaka, azonao atao ny mizara ireo zavatra samihafa mba hamoronana buzz amin’ny alàlan’ny bokinao ary mampiditra ny mpihaino
Độc quyền độc quyền
Mifandraika amin’ny votoatiny (sary, sns.)
3. Mở rộng mạng của bạn
Toy ny ezaka Rehetra eo amin’ny fiainana, raha ny momba ny famoahana ny tenany, dia manampy tokoa ny mahafantatra ny olona marina!
Ny fifandraisana amin’ireo mpitoraka blaogy haha ​​ao amin’ny fonosanao dia ho fanampiana goavana amin’ny famoahana ny teny momba ny bokinao.
Te-hahita mpamaham-bolongana mikendry ireo mpihaino mitovy aminao aminao ianao, fa ireo izay tsy mifaninana mivantana aminao. Ohatra, raha mamoaka boky ianao mba hampivarotana ny serivisy omenao, dia mety tsy te hanantona bilaogera ianao hanampy anao hamidy ny bokinao raha toa ka manolotra serivisy Tsy mahasoa azy ireo ny tsena ny serivisy fa tsy ny azy! Ny tanjona dia ny hahitana ireo bilaogera mahay miaraka amina haino aman-jery milamina, izay mifanena amin’ny anao manokana, saingy tsy mifaninana amin’ny mpivarotra.
Raha mamaly an-tsoratra ianao dia tsidiho daholo ny valin-teninao.
Raha mametra ny fehezan-teny iray ny mpanadina iray, dia tadidio izany.
Raha tsy mazava ireo fanontaniana ireo, dia mangataha fanazavana.
Aza matahotra manokatra kely! Izany dia hamela ny mpihaino anao hiteny aminao bebe kokoa.
Blog khách dia hanampy anao hanatratra mpihaino vaovao ary hanaparitaka ny teny momba ny bokinao.
Zava-dehibe ny manontany ny mpitoraka blaogy 60-90 andro mialoha mba hasongadina ao amin’ny bilaoginy. Na dia bilaogy madinika aza dia matetika miasa amin’ny kalandrie famoahana ary manomana mialoha, noho izany dia aza avela hatramin’ny farany. Ataovy azo antoka ny fanaovana fikarohana!
Mitadiava mpamaham-bolongana miaraka amin’ny mpamaky kinendry toy ny anao ihany, ary vakio tsara ny vahiny izay mametraka torolàlana mazava tsara ary alohan’ny hanana.
6. Tour ảo Manangana blaogy
Matetika izy ireo dia hangataka anao handefa boky (na vitsivitsy) mba handefasana sy / na hamerenana. Ny mpitoraka bilaogy sasany dia hanasa anao handray anjara amin’ny resadresaka iray na manoratra lahatsoratra vahiny. Misy boky an’ny tolotra PR izay handamina bokossible iray ho anao. Ny fonosana dia mety amin’ny $ 40 ka hatramin’ny $ 200, arakaraka ny fampidirana ny serivisy. Andramo ny mikaroka "Tolotra PR momba ny PR" na "Tolotra boky momba ny Fitidihana bilaogy" mba hitadiavana mpamatsy iray, ary ataovy izay hahazoana antoka fa hikarakara tsara azy ireo alohan’ny hanamboarana azy ireo.
7. Manaova fialan-tsasatra
Iza no tsy tia omena fotsiny? Ny fialan-tsasatra dia fandresena ho anao, mpamaham-bolongana, ary mpamaky azy ireo. Ny mpanoratra dia afaka mamorona buzz amin’ny alàlan’ny fahazoana olona hiditra ao amin’ny fanomezam-boninahitrao ary hanao sonia ny lisitry ny mailakao.
Ireo tranonkala tahaka ny Rafflecopter, Viralsweep, ary Rafflerobot dia mahatonga azy ho tsotra hanomboka sy handamina fanomezana ho an’ny bokinao.
Alao sary an-tsaina hoe mahery vaika ny manana lisitr’ireo olona efa nomanina izay efa tia ny soratrao, ary mandefa azy ireo mailaka mampitandrina azy ireo fa ny.
Ny fananganana lisitra mavitrika mialoha ny famoahana dia mety hahatonga izany ho zava-misy. Amin’ny lisitry ny lisitry ny mailaka dia ahafahan’ny mpiblitika manohy sy mandrindra ny fizotry ny asa soratra sy famoahana. Aoka ho azo antoka fa manomboka manangana ny lisitra ianao alohan’ny hamoahana ny bokinao! J bd ireto hafatra ireto ho an’ny toro-hevitra:
Fomba fijerena 6 handefa imailaka bebe kokoa amin’ny blôginao
Ahoana ny fomba hitarana ny masoivohonareo amin’ny fanavaozana anatiny
Manorata ny valopyo: Ny miễn phí tsara indrindra amin’ny famokarana mpitarika
Tsy safidy tsara ho an’ny Rehetra izany, fa mety ho tetika mahery raha ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Ny safidin’ny vidin’ny vidiny dia mety hahasarika mpividy ary manentana ny olona hividy ny bokinao.
Hevero ny fanombohana amin’ny vidiny vonjimaika mandritra ny andro vitsivitsy aorian’ny famoahana azy mba hahazoana mivarotra bebe kokoa sy hananganana bebe kokoa. Kindle Countdown Thỏa thuận dia ahafahan’ny mpanoratra manefa ny fampidiran-drakitra voafetra fotoana voafetra amin’ny bokiny. Raha manana boky maimaim-poana ianao, manolotra iray ho an’ny fahalalahana (na ho vidin’ny vidiny) dia matetika miteraka fivarotana bebe kokoa amin’ny boky haha.
10. Quảng cáo trả tiền
Azonao atao ny mamorona dokam-barotra amin’ny Google Adwords, Facebook, ary ireo media sosialy haha. Ny dingana voalohany manamarina hoe iza ny tambajotra an-tserasera no hahomby indrindra amin’ny bokinao dia ny mahafantatra sy mahatakatra hoe iza no mpihaino anao. Raha fantatrao hoe iza no ampiasain’ireo mpamaky anao indrindra, dia fantatrao ny sehatra tsara indrindra hamoahana ny bokinao. Diniho ny fampiasana azy:
Google Adwords: Afaka misafidy ny Google ny adiresy. Tsy handoa afa-tsy raha misy olona miantso ny dokambarotra hitidika ny tranonkalanao / rohy amin’ny bokinao. Azonao atao ny mametraka ny teti-bola manokana. J bd ny antsika Soso-kevitra 5 ho an’ny fanentanana Adwords nahomby.
Quảng cáo trên Facebook: Amin’ny Facebook, afaka misafidy ny karazan’olona tianao hahatratrarana ny bokinao ianao, izay hahatonga ny dokambarotra ho azo ampiharina bebe kokoa ary hit Tahaka ny Adiresy Google, dia afaka mametraka teti-bola izay afaka mifototra amin’ny fetran’ny fandefasana isan’andro ho an’ny dokambarotra iray na ny Totalin’ny fampielezan.
Quảng cáo trên Instagram: Instagram dia iray amin’ireo sehatra fampiroboroboana lehibe indrindra eran-tany, miaraka amin’ny vondron’olona mihoatra ny 500 tapitrisa. Ny dokambarotra dia azo novidina sy voatantana tamin’ny alalan’ny serasera ho an’ny tenany manokana ary ny tetibola dia mety ho tokana ho an’ny mpanoratra tsirairay.
« 10 основних правил ефективного маркетингу Snapchat Ny androm-piainana 52 an’ny Idea dia manomboka amin’ny blôginao »
Slovo fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny